Company Profile - Pingxiang Baisheng Chemical mbukota
Inert seramiiki bọl
17-30% seramiiki bọl
30-90% seramiiki bọl
90-99% seramiiki bọl
AD-946 amonia decomposition mkpali
PSR sọlfọ mgbake mkpali
SCR denitrification mkpali
Ozone decomposition mkpali
CO mwepụ mkpali
Air ọcha multifunctional mkpali
Ozone ọxịdashọn mkpali
Efere ụlọ elu mbukota
Efere Random mbukota
Efere ahaziri mbukota
Metal ụlọ elu mbukota
Metal Random mbukota
Metal ahaziri mbukota
Plastic ụlọ elu mbukota
Plastic Random mbukota
Plastic ahaziri mbukota
Pingxiang Baisheng Chemical mbukota Co., Ltd e hiwere na 2011 na edebanyere isi obodo RMB 11,88,000. Baisheng dị na Efere Industrial Base, ekenyenede ebe 30000m 2, isi obodo na-ekwusi ike nke RMB 5,000,000.The kwa afọ ike o a factory na seramiiki ngwaahịa bụ 10,000 tọn. Anyị tumadi aka Industrial ceramik na mkpali.
Anyị na-adabere oru nkwado nke Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, China Petroleum Group Jilin Design Institute, Pingxiang University na ndị ọzọ na nnyocha sayensị institutes, Guzosie Ike atọ mmepụta na research n'elu ikpo okwu. E nwere 138 ọrụ, 58 nọ na a mahadum ma ọ bụ n'elu, teknuzu na nlekọta anya, ndị a, a agadi technical titlesin18 ndị mmadụ. Baisheng nwekwara ogologo oge goro 10 ulo oru ceramik na mmepe, na mkpali nnyocha na mmepe ọkachamara na ndị ọkachamara maka ụlọ ọrụ technical adviser.Baisheng ka ikike 3 Ikike nchọpụta Kemịkalụ, 15 mmekọ nlereanya nchọpụta Kemịkalụ; ọkachamara akwụkwọ bipụtara ihe karịrị 50 isiokwu; enwetara 2 Science na technology ọganihu award, 3 sayensị na nkà na ụzụ nweta tụlee; duziri 1 mba ozo oru, 10 n'ógbè sayensị na nkà na ụzụ oru ngo, na abuana ke Nwa nke 1 mba ọkọlọtọ "ulo oru seramiiki bọl inert seramiiki bọọlụ" (HG / T 3683.1-2000).
Baisheng nwere mbara ike nke ulo oru seramiiki ngwaahịa mmepe, imewe, mmepụta na echichi nke nile na otu ọrụ, nke nwere ike na-emepụta ulo oru seramiiki (corrugated mbukota, seramiiki bọl, perforated seramiiki bọl, seramiiki saddles, seramiiki brick na osisi), metal, plastic ụlọ elu mbukota, molekụla myọ (3A, 4A, 5a, 13X usoro), ọrụ alumina. Environmental mkpali nwere ike na-emepụta ala okpomọkụ catalytic combustion mkpali, amonia decomposition mkpali, Methanation catalyst.Ozone ọxịdashọn mkpali na ihe ndị ọzọ chemical ulo oru mkpali.
Baisheng ka pụrụ iche ngwá n'ihi na obi ụtọ-egwe ọka, apịtị ejegharịrị, ịkpụzi, ihicha na sintering, na elu ntupu belt ọwara kiln.The sintering okpomọkụ nwere ike ịbụ dị elu dị ka 1750 ℃ ​​na instrumentation uru nke RMB 7.000.000. anyị guzosie ike a R & D center pụrụ iche nnyocha na ule pesonel, na dijitalụ ngosi engineering seramiiki compressive ike tester, ire ọkụ photometer, electronic gbasara nyocha itule, silicate chemical mejupụtara ngwa ngwa analyzer, DHG Series Heating na ihicha oven, Fast kpo oku na-eguzogide ọkụ, ngwa ngwa grinder , chemical corrosion eguzogide ule ngwaọrụ, electronic ule ọkụ, abrasion tester na ndị ọzọ na oge a na ngwá nnyocha na-anwale methods.the mkpokọta uru nke nnyocha instrumentation bụ karịa RMB 5.000.000.
Anyị àgwà a na-achịkwa dị ka ISO9001, na batches ngwaahịa nditịm ule site Test center, ule ihe gụnyere chemical akụrụngwa, size ndiiche, ọdịdị chọrọ, ndinuak ike, mmiri absorption, alkali eguzogide, Acid eguzogide, thermal ujo resistance.The R & D ego n'elu 600,000 n'afọ ọ bụla.
Anyị ụlọ ọrụ bụ mmekota network òtù China Petroleum otu, ma ugbu a anyị bụ ndị ruru eru soplaya CHEMCHINA na China National Kol Group Corp na ulo oru seramiiki ụlọ ọrụ kpọrọ ndutịm department.we bụ ihe ISO9001 shop na ngwaahịa irite ruru eru akwụkwọ seramiiki ngwaahịa Analysis center.our ngwaahịa ndidi n'ime mba ahịa, dị ka Germany, Japan, Denmark, Russia, America, Iraq.annual sales iru RMB6,000,000.